Adeegga Shiinaha ee Adeegga iyo wakiilka | Sunson
Ku soo rar koontadaada gaarka ah ee xawaaraha ayaa aad qaali u ah? Ka dib markaa maxaan u rarneyn muggeena? Waxaan ku siineynaa macaamiisha adeegga xawaaraha sida DHL, UPS iyo EMS qiimo jaban. Gaarsiinta degdegga ah ee heerarka dhaqaalaha, waad u qalantaa inaad isticmaasho.
DHL waa hoosaad ka tirsan Deutsche Post DHL, oo ​​ah koox caan ku ah boosta iyo kooxda saadka. Waxay badiyaa ka kooban tahay qaybaha ganacsiga ee soo socda: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight and DHL Supply Chain. Sannadkii 1969, DHL waxay furtay marinkoodii ugu horreeyay ee gaarsiinta degdegga ah ee San Francisco ilaa Honolulu. Tan iyo markaas, waxay kusii waday horumar xawaare layaableh waxayna noqotay hogaamiye suuq ka ah warshadaha gaarsiinta degdegga adduunka. Waxaa loo diri karaa 220 waddan iyo gobollo adduunka oo dhan ah, oo daboolaya in ka badan 120,000 oo safar (meelaha ugu muhiimsan ee lambarka boosta), waxayna siisaa adeegyo iyo farriin gudbinta macaamiisha shirkadaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Haddii ay tahay dukumiinti ama xirmo, haddii la geeyo isla maalintaas, muddo xaddidan ama maalin kooban, DHL International Express waxay ku siin kartaa adeegyo daboolaya baahiyahaaga. Qiimuhu waa macquul oo gaarsiintu waa dhakhso. Waa adeegga aad jeceshahay ee caalamiga ah.
UPS International Express waxaa lagu aasaasay Mareykanka waana shirkadda ugu weyn adduunka ee gaarsiinta alaabada. Waxaa ka go’an inay taageerto horumarinta ganacsiga adduunka. Sidoo kale waa hormuudka bixiyeyaasha gaadiidka xirfadeed, saadka, iyo adeegyada elektaroonigga ah, oo u adeegaya in ka badan 220 waddan iyo Gobol, si ay kuu siiso adeeg tayo sare leh oo dhakhso leh.
Adeegga Fedex wuxuu u qaybsan yahay nooca mudnaanta leh (IP) iyo nooca dhaqaalaha (IE), mudnaanta (IP) adeegga xawliga leh: waqtiga tixraaca 2-5 maalmood oo shaqo ah, dhaqaalaha (IE) adeegga xawaaraha: waqtiga tixraaca 3-7 maalmaha shaqada, Waa shirkadda ugu weyn adduunka ee gaarsiinta xawaaraha, oo u adeegta in ka badan 220 dal iyo gobollada adduunka oo dhan. Waa adeeg ballaaran oo ballaadhan, ammaan ah oo la isku halleyn karo, waqti-dhakhso badan, oo adeeg-bixin caalami ah oo albaab-ilaa-albaab u furan. Waxay ku habboon tahay daabulidda qiime qiimo leh, shixnado xasaasi ah, waxayna bixisaa adeegyo deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo.
EMS International Express (Worldwide Express Mail Service) waa adeeg casri ah oo caalami ah oo ay maamusho UPU. Ganacsiga caalamiga ah ee EMS wuxuu ku raaxeeyaa xuquuqda mudnaanta mudnaanta boostada, caadooyinka, duulista iyo waaxaha kale. Gudbinta xawaaraha sare iyo tayada sare leh ee waraaqaha xaaladaha degdega ah ee caalamiga ah, dukumiintiyada, biilasha maaliyadeed, shaybaarada badeecada iyo dukumiintiyada kale iyo agabyada isticmaalayaasha. EMS international Express uma baahna lacago dheeraad ah oo shidaal ah waxayna gaari kartaa 210 meelood oo adduunka ah. Awoodda ka saarista kastamka xawliga ah waa mid xoogan, kastamayntiisana waxaa lagu mideeyay boostada.
Adeegyada Bixinta Dunida
Noocyada Adeegyada Boostada Khadadka Tooska Ah
Adeegga Bakhaarka Shiinaha